File:Commons-logo.svg - ဝီကီပီးဒီးယား
Size of this PNG preview of this SVG file: ၄၄၆ × ၅၉၉ ပစ်ဇယ်. အခြား ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု: ၁၇၈ × ၂၄၀ ပစ်ဇယ် | ၃၅၇ × ၄၈၀ ပစ်ဇယ် | ၄၄၆ × ၆၀၀ ပစ်ဇယ် | ၅၇၁ × ၇၆၈ ပစ်ဇယ် | ၇၆၂ × ၁၀၂၄ ပစ်ဇယ် | ၁၀၂၄ × ၁၃၇၆ ပစ်ဇယ်။
မူရင်းဖိုင် ‎(SVG ဖိုင်, ၁၀၂၄ × ၁၃၇၆ pixels ကို အကြံပြုသည်, ဖိုင်အရွယ်အစား - ၉၃၂ ဘိုက်)
ရင်းမြစ် This version created by Pumbaa, usingaproper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)
စာရေးသူ SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.
ကာလပေါ် ၁၃:၄၃၊ ၃ ဇွန် ၂၀၁၄ ၁၀၂၄ × ၁၃၇၆ (၉၃၂ ဘိုက်) Steinsplitter minor corrections: geometry, structure, colors corrected (by Pumbaa80 & Perhelion)
၁၀:၀၅၊ ၁၀ ဧပြီ ၂၀၁၄ ၁၀၂၄ × ၁၃၇၆ (၁၀ KB) ChrisiPK nowavalid SVG, thanks to Be..anyone
၀၁:၄၃၊ ၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၇ ၁၀၂၄ × ၁၃၇၆ (၁၀ KB) Connel MacKenzie Reverted to version as of 10:57, 15 May 2006
၀၇:၂၁၊ ၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၆ ၁၀၂၀ × ၁၃၈၀ (၆ KB) Dbc334 smaller size
၁၀:၅၇၊ ၁၅ မေ ၂၀၀၆ ၁၀၂၄ × ၁၃၇၆ (၁၀ KB) WarX Proper version :) - previous was not scaling proper in inkscape
၀၂:၂၈၊ ၂၁ မတ် ၂၀၀၆ ၁၀၂၄ × ၁၃၇၆ (၁ KB) Pumbaa80 File completely re-coded. Now featuring geometry and structure ;-) Modifying this image version is definitely easier.
၁၇:၅၇၊ ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၅ ၁၁၄၄ × ၁၅၃၄ (၂ KB) Dbenbenn scale up, so it is big enough with "|thumb" syntax
၂၃:၄၆၊ ၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၅ ၁၁၄ × ၁၅၃ (၂ KB) Optimager~commonswiki My old one wasalittle bit too cropped
၂၃:၄၂၊ ၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၅ ၁၀၉ × ၁၄၆ (၂ KB) Optimager~commonswiki
၂၃:၃၁၊ ၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၅ ၆၁၂ × ၇၉၂ (၂ KB) Optimager~commonswiki
File:Brigadier General Kyaw Zaw.png
aa.wikibooks.org တွင် အသုံးပြုမှု
"https://my.wikipedia.org/wiki/File:Commons-logo.svg" မှ ရယူရန်